ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဦးဝင်တင် ရေးသားခဲ့သည့် မူရင်း ဆောင်းပါးနှင့် ဘာသာပြန် | ဒီရေ
ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဦးဝင်တင် ရေးသားခဲ့သည့် မူရင်း ဆောင်းပါးနှင့် ဘာသာပြန်
U Win Tin isamember of the Central Executive Committee andafounder of Burma's National League for Democracy party. He wasapolitical prisoner from 1989 to 2008. Support 1991 Nobel Peace Prize recipient Aung San Suu Kyi and the struggle for freedom and democracy in Burma:
မကြာသေးခင်က အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျိမ်းဝက်ဘ် ကျနော့်တိုင်းပြည်ကို အလည်အပတ်သွားခဲ့တာ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တာတွေအပေါ် လူတွေက အများကြီးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဝက်ဘ်က မြန်မာပြည်ရဲ့ အုပ်စိုးသူအာဏာပိုင်တွေနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးချင်တာကို ကျနော်နားလည်ပါတယ်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတာကတော့ သူ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာ ကျနော် တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးကို ထိခိုက်နစ်နာစေပြီး မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာ အလေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းအရာကတော့ ရေရှည်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဝက်ဘ်က ကျနော်တို့ကို စဉ်းစားစေချင်တဲ့ ရှေ့နှစ် "ရွေးကောက်ပွဲ" အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရက စီစဉ်ထားတဲ့ ဟန်ပြရွေး ကောက်ပွဲဟာ ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ လိုလားနေတဲ့လွတ်လပ်ရေးကို သရော်မော်ကားလုပ်ပြီး စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ထာဝရတည်တန့်အောင် လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဆီက နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ မဲဆန္ဒအပြတ်အသတ်နဲ့ စစ်တပ် အုပ်စိုးမှုကို ပယ်ချခဲ့ပြီး ကျနော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို လွှတ်တော်နေရာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင်းအပ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဖွဲ့ချုပ်ကို အစိုးရ ဖွဲ့ခွင့်ပေးဖို့ စစ်အုပ်စုကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ၁၉ နှစ် အတွင်းမှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေဟာ တရားမျှတမှု၊ တဦးချင်းအခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး၊ မြန်မာပြည်သူ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရပုံသဏ္ဍာန်တို့ကို ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆို ဖော်ပြ နေရင်း အကျဉ်းချမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှု နဲ့ အသက်ဆုံးပါးမှုတို့ကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲကို တခါမှမရပ်နားခဲ့သလို စစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားရေး အခြေခံပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့အချက်အချာ နိုင်ငံရေးပြဿနာ လူမှုရေးပြဿနာတွေ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့လည်း တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနှစ်ရပ်ဟာ ဆက်စပ်နေတာကို လုံးဝသံသယမရှိပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တချိန်တခါက အာရှတိုက်ရဲ့စပါးကျီကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးအဖျက်ပေါ်လစီတွေနဲ့ စစ်အာဏာထိန်းထားနိုင်ဖို့ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေတာကြောင့် ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ ဗယုတ် သုက္ခတိုင်းပြည် ဖြစ်နေပါပြီ။
စစ်အစိုးရဟာ ဟန်ပြ"ရွေးကောက်ပွဲ"ကတဆင့် သူ့ကိုယ်သူ တရားဝင်မှုမျက်နှာဖုံးတပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပြီး "စည်းကမ်းပြည့်ဝ တဲ့ဒီမိုကရေစီ"ကို လာမယ့်နှစ်မှာထူထောင်မယ်လို့ ကြွေးကြော်နေပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခု မေလမှာ ဧရာမလေမုန်တိုင်းကြီး တခုက ဗမာပြည်ကို ထောင်းထောင်းချေ၊ လူ တသိန်းကျော် အသက်ဆုံးစေခဲ့ပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စစ်အစိုးရက ရယ်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ဇာတ် တခုသုံးပြီး၊ စစ်အာဏာကို ရာသက်ပန်ဦးထိပ်ထားမယ့်အခြေခံဥပဒေကို မဲဆန္ဒရှင် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခြေခံဥပဒေဟာ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိလှတဲ့ "နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်" ရှိသူတွေကို အစိုးရရာထူးမယူစေဖို့ တားမြစ်ထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေ အာဏာမရနိုင်အောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
တချို့သောနိုင်ငံတကာလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေက ရှေ့နှစ်မှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို အခွင့်အလမ်း တခုအဖြစ် မြင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့အခြေခံဥပဒေမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်များအရ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ အတုအယောင်ဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာတို့ ချီတက်လှုပ်ရှား၊ အဖမ်းအဆီးခံ၊ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခံ၊ အသက်ဆုံးပါးခံ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူတွေကို ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွက် လွတ်လပ်မှု ဆောင်ကျဉ်းလာဖို့ နည်းနည်းလေးမှ မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုထဲ သွားပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် မစွန့်လွှတ်နိုင်ပါဘူး။
အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တရားမျှတပါတယ်။ ဧပြီလတုံးက ကျနော်တို့ဟာ နောက်ထပ် ကြေညာချက် တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းရင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ အခြေခံ ဥပဒေကို အပြည့်အစုံ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့၊ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းတွေ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်တွေပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ တခြား လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ၂၀၀၀ ကို ဆက်လက်အကျဉ်းချ၊ တိုင်းရင်းသား တွေကို အကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီး ဒီမို ကရေစီကိုလည်ပင်းညှစ် နှိပ်ကွပ်မယ့်စည်းကမ်းချက်တွေ အတင်း တိုးမြှင့် ကြပ်မတ်တဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ နိုင်ငံတကာမိသားစုတွေက ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍတွေကကနေ အကျိုးရှိရှိ ပါဝင်ပတ်သက်ကြမှာလဲ။ ပထမဦး ဆုံးကတော့ ဂျိမ်းဝက်လိုတာဝန်ရှိလူကြီးတွေက တရုတ်ပြည်နဲ့လှည့်ခြောက်တာကို စွန့်လွှတ်ရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲစို့ ဆိုတဲ့ သူ့လေသံဟာ ခေတ်နောက်ကျပြီး လက်တွေ့မကျတဲ့ အယူ အဆပေါ် အခြေခံထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုအယူအဆတွေကိုပယ်ချပြီး ဂျိမ်းဝက်ကို “ကျမတို့က ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ် အကြောက် တရားတွေ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်တွေ အခြေခံပြီး ဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့မဆို ဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်။ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ အားလုံးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး တန်းတူညီမျှဆက်ဆံမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ဟာ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းကို ကိုယ်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် ရှိတာ မဟုတ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေး လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်တယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်ကတော့ အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်တိုင်က တခြားနိုင်ငံတွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို စစ်အုပ်စုနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတကာမိသားစုတွေက ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျနော်တို့တတွေ ရယ် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရယ်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံအောင် တိုက်တွန်းဖြောင်းဖြပေးဖို့ ထိတွေ့ဆက်ဆံစေချင်တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ခုချိန်မှာ အမေရိကန်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများက ဗမာပြည်ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့အားလုံး အလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေအတွက် သူတို့ တွေက ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်စွာ အတူတကွသွေးစည်းရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ စစ်အစိုးရက အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တကွ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကို ဆောင်ရွက်မယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးမယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေအပေါ် တိုက်ခိုက် ပစ်ခတ်တာတွေ ရပ်စဲမယ်၊ ပြီးတော့ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင် တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းလာမယ် ဆိုရင် အခုရှိနေတဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာ သင့်တော် တဲ့အချိန်တွေမှာ ရုပ်သိမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ ကျနော်တို့ခံယူချက်အပေါ် ဘယ်လိုမှ တွေဝေသံသယစိတ်တွေ မပွားကြပါနဲ့။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဗမာ ပြည်သူ လူထုကြီး တိုက်ပွဲဝင်ရယူနေတဲ့လွတ်လပ်ရေးကို အဓမ္မလုယူမယ့်၊ ရှင်လမ်းမရှိအောင် ချို့ယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ သွေးကြောင်တွေဝေစွာနဲ့ ဒူးထောက်ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ အမြဲ အသင့် ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ အသက်သွေးချွေးတွေ ဘဝတွေ အများကြီး စွန့်လွှတ်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးတွေ ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆက်လက် ဆင်နွှဲဖို့ဆိုရင်တော့ အသင့်ရှိတာထက်တောင် ပိုပါတယ်။
(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်၊ အဖွဲ့ချုပ် စတင် တည်ထောင်သူ တဦး၊ ၁၉၈၉ မှ ၂၀၀၈ အထိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား)
“အင်္ဂလိပ်မူရင်းပေးပို့ပေးသော အကို နှင့် ဘာသာပြန် မျှဝေပေးသော ညီငယ်တို့အားကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း ကျွန်တော်များ ဘလောက်တွင် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။”